Yini okuphuma kwezezimali? | Ezezimali Zomnotho
Yini okuphuma kwezezimali?
Ngokuqinisekile uzwile kaningi kwesinye isikhathi ukuthi yini okuphuma kwezezimali. Ngenhloso eyinhloko yokutshala imali kule mikhiqizo ukuze khulisa inzuzo efeni lakho lomuntu siqu noma lomndeni. Kepha uyazi ngempela ukuthi amamodeli aqukethe ini utshalomali? Okuphuma kokunye kwezezimali kungumkhiqizo noma okokusebenza inani lalo elincike enanini lenye impahla. Impahla encike kuyo ithatha igama lempahla engaphansi, ngokwesibonelo inani lekusasa kwigolide lisuselwa kunani legolide. Noma esimweni sezinye izimpahla zezezimali, njengezinto zokusetshenziswa noma izinsimbi eziyigugu, phakathi kokunye okufanele kakhulu.
Kunoma ikuphi, ziyithuluzi elinamandla kakhulu lokwenza ngcono amazinga wenzuzo ekutshalweni kwemali. Kepha ngokucatshangelwa okukhethekile futhi ngukuthi ingozi yokusebenza ziphakeme kakhulu kunangeminye imikhiqizo ejwayelekile yezezimali. Lapho kuyiqiniso ukuthi ungathola imali eningi, kepha ngesizathu esifanayo futhi ushiye ama-euro amaningi endleleni. Lesi ngesinye sezidingo okufanele uzicabange ekusebenzeni kokuphuma kwezezimali.
Kukhona okuphuma kokuningi kwezezimali njengoba kukhona izimpahla axhunywe kuzo. Ngalesi sizathu kungumkhiqizo ohlukaniswe kakhulu ezimakethe zezezimali. Ngoba impela, unamamodeli amaningi lapho ongakhetha khona kusuka manje. Esinye sezigaba ezithengiswa kakhulu yizikhungo zezezimali yilokho okuhlobene ngqo nohlobo lokuphepha okuyisisekelo. Ngokwezinga lokuthi kungumkhiqizo onikelwa ukuthuthukisa amanani enzalo aphansi ahlinzekwayo okwamanje. Kepha ngengozi enkulu ekuphathweni kwayo, njengoba uzobona kusukela manje kuqhubeke.
1 Okususwayo: inani lokucashile
2 Izidakamizwa ze-Forex
3 Ukuphuma kokulingana kanye nempahla
4 Yini umonakalo?
5 Izinzuzo zokutholakala kwezezimali
Okususwayo: inani lokucashile
Lokhu kukhethwa kuveza amamodeli amaningana wokutshala imali, phakathi kwawo okuvelele ngaphezu kwakho konke okuphuma kwizinga lenzalo. Kulokhu, kususelwa ekhetheke kakhulu ukuthi, njengoba kunengqondo ukuqonda, kuncike kakhulu kumazinga wenzalo. Ama-derivatives afana nalawo aziwa ngokuthi ukushintshaniswa kwezinga lenzalo nokuthi ukusetshenziswa kwawo okuyinhloko kusekelwe ekutheni uzivikela ekwehlukaneni okungaba khona noma ekuchayekeni ngokweqile kunani lenzalo. Lokho wukuthi, uma ucabanga ukuthi lokhu kukhishwa okubalulekile kungenziwa, ungenza lokhu kuhamba kube nenzuzo ngokusebenza okukhethekile. Ngoba inzuzo etholakalayo ingaba nkulu kuneminye imikhiqizo ejwayelekile yezezimali.
Ngokwalokhu kubuka, amanani wenzalo angaphezulu kokuguquguqukayo okusetshenziselwa ukuxhumanisa noma yimuphi umugqa wesikweletu. Uma kungenjalo, kunalokho, kusebenza ukwenza izimali ngezindlela ezahlukahlukene. Kunoma ikuphi, kungenye yezindlela ezingasetshenziswa eziba yimfashini ngokungabikho kokukhetha ongakwenza thola imbuyiselo yokonga. Kodwa-ke, akuwona umkhiqizo ojwayelekile wezezimali, uhlobo oluqashwa yingxenye enhle yabatshalizimali abancane nabaphakathi. Esikhundleni salokho, yiphrofayili yomtshali oyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Vele, lokhu kungenye yezinto ezitholakala njalo emakethe yezezimali. Ngoba empeleni, isu layo lincike ekusebenziseni ukwahlukahluka kufayela le- izinga lokushintshaniswa kwemali efanele kakhulu. Akumangalisi ukuthi lezi zinhlobo zokuphuma zivame ukwenziwa okukhethwa kukho noma ikusasa ngemali engeyona eyabo noma ngezimali ezimbili zakwamanye amazwe. Kusukela kokujwayelekile kakhulu njengedola laseMelika noma i-euro uqobo kuya kokunye okungajwayelekile njengamaliyali aseBrazil, ama-pesos noma izimali ezingalindelekile zaseNingizimu-mpumalanga Asia.
Esinye sezici zalesi sici esikhetheke kakhulu sezezimali ukuthi sikuvumela ukuthi uthole inzuzo enkulu kakhulu. Vele, ngaphansi kokuqina okukhulu kunalokho kwemikhiqizo yendabuko eyejwayelekile. Yize ngesizathu esifanayo, kufanele ukhumbule ukuthi ungashiya futhi ama-euro amaningi endleleni yalokhu kutshalwa kwezimali. Ngakho-ke, i- ukuqaphela Kuzoba yisona sici esivamile sokudlala kwakho. Ngaphezulu kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe nokunye okusemqoka. Ngomkhiqizo wezezimali osuthandwa ngabatshalizimali abathengisayo.
Ukuphuma kokulingana kanye nempahla
Ngaphandle kokungabaza enye yezinto eziphuma phambili kwezemali ongazithola njengamanje ezimakethe zezezimali. Yebo, kulokhu kuyisigaba sezinto ezivela kokunye okuncike ngokuyisisekelo kwimpahla enaniselwe ezimakethe zamasheya, isibonelo amasheya noma amabhondi. Kodwa-ke, kunezinketho kaningi ezintweni zokusetshenziswa, njengoyela noma igolide. Kodwa-ke, inkinga yabo enkulu ukuthi iyinkimbinkimbi kakhulu ukusebenza nayo.
Ngandlela thile, zifana kakhulu nalokho i- ongakhetha kukho noma ikusasa. Ngokwehluka okumbalwa kakhulu ngokwesakhiwo salo kanye nemishini yokusebenza nabo. Kunoma ikuphi, kuyimikhiqizo eyinkimbinkimbi kakhulu kunayo yonke futhi ngenxa yalokho ayihloselwe wonke amaphrofayili wabatshalizimali abancane nabaphakathi. Kuze kube seqophelweni lokuthi zikwenza ulahlekelwe yimali eningi ekusebenzeni kusukela manje. Kunoma ikuphi, kuyisu onalo okwamanje lokusebenzisa izinto zokusetshenziswa noma izinsimbi eziyigugu, njengezimpahla zezimali ezifanele kakhulu okwamanje.
Ukuhweba izimpahla zezimali akulungele zonke izethameli. Kepha kuphela kwabambalwa abanelungelo, hhayi ngoba bengamamodeli wokutshala akhethekile kakhulu. Kepha ngoba inkinga enkulu abayibandakanya ukuqonda kwabo okuyinkimbinkimbi. Akumangalisi ukuthi ungahle ungazi nokuthi usebenza kanjani nalezi zimpahla ezikhethekile zezezimali. Kungakudalela inkinga engaphezu kweyodwa lapho uvula izikhundla. Njengomphumela walokhu, kulula kakhulu ukuthi kusukela manje ubheke ezinye zezici ezifanele kakhulu, njengalezo esikudalula kuzo ngezansi.
Kungumkhiqizo wezezimali othize odinga ulwazi lwangaphambilini ngezimakethe zezezimali lapho usebenza khona. Ungazami ukuphoqa ukusebenza ngoba kuzoba nemiphumela engadingeki kwizintshisekelo zakho njengomtshali-zimali omncane naphakathi.
Vele, akuhlangene kakhulu nokuthenga nokuthengisa amasheya emakethe yamasheya. Lesi ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani kufanele uzifake emkhakheni ofanayo ekutshalweni kwemali. Ucabanga lokho bangamamodeli anokuhlukahluka okuningi futhi kuze kufike ezingeni lokuthi baphambuke ezindleleni zabo. Kuze kube seqophelweni lokuthi kungenzeka angabi amamodeli ofanele kakhulu wokutshala izimali wezimpawu zakho njengomtshali-zimali.
Akukho okuphuma kokukodwa, kepha ngokuphambene ungakhetha phakathi kokunye okuvela okungashintshwa kuphrofayili yakho njengomsebenzisi. Kusuka kutshalomali ezinsimbini eziyigugu njengegolide nesiliva ukufuna inzuzo ekushintsheni kwezimali eziyinhloko zomhlaba. Awunayo imingcele yokucinga okuqukethwe kwalezi zici okucutshungulwa okuncane ngabatshalizimali abakhulu.
Uma into echaza le mikhiqizo ekhetheke kakhulu yezezimali ngokungangabazeki i- asizakale ezingeni ukuthi babe. Ukufika ezingeni lokuthi bangenza uthole imali eningi kunezinye izinketho zokutshala imali. Kepha inqobo nje uma wazi ukuthi ungasebenza kanjani nabo, kungani uma kungenjalo, izingozi zokutholwa zinkulu kakhulu. Hhayi ngeze, kufanele uzibuze ukuthi kufanele yini ukubaqasha kusukela manje kuqhubeke.
Izinzuzo zokutholakala kwezezimali
Ngakolunye uhlangothi, lezi zinhlobo zokutshala imali zikulethela izinzuzo ezinye imikhiqizo yezezimali ezingenazo. Ngalo mqondo, enye yamanga athakazelelwa kakhulu ekutheni ivula iminyango emisha emhlabeni wezimali. Njengoba nje wawungazange ucabange kusukela ekuqaleni. Phakathi kwazo futhi kugqama iqiniso lokuthi ungakwazi ukuhweba noma iyiphi impahla yezezimali. Njengenye indlela yangempela yesimo esingesihle ezimakethe zezimali.
Kuyamangaza futhi ukuthi okuphuma kwezezimali kungangeza inani kutshalomali. Uma nje iminikelo yakho yezezimali ingekho enkulu kakhulu. Kepha ngemisebenzi ehambisanayo nakwendabuko. Uma ukusebenza ngaphansi kwale mingcele akungabazeki ukuthi kungaba imisebenzi enenzuzo enkulu yezintshisekelo zakho. Ngoba uzoba namamodeli ongacabangi eminyakeni embalwa eyedlule. Njengesibonelo, ezimweni ze- etholakala ekukhishweni kwe-CO2, ukwehla kwamandla emali noma enye into.
Akumangalisi ukuthi ubhekene nomkhiqizo wezezimali oguquguqukayo ongashintshelwa kuzimo eziningi nokuhlukahluka. Lokho wukuthi, ungahweba ngokutholakala nganoma yisiphi isikhathi. Ukuze ngale ndlela, ube nezinketho eziningi zokwenza imisebenzi ibe nenzuzo kusukela manje kuqhubeke. Yize kungakweluleki ukuthi uhlobanise lo mkhiqizo njengokungathi kungukutshalwa kwemali kumasheya okumele uwasebenzise. Ngoba lapho-ke uzobe wenza iphutha elibi kakhulu elingakulimaza esifisweni sakho sokwenza ngcono izimpahla zakho noma zomndeni wakho. Kungenye yezici okufanele uzicabangele ukuvula noma ukuhlehlisa izikhundla kumafa wezimali akhethiwe. Ngaphezu kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Yini okuphuma kwezezimali?
Kuyini ukubeka imali ekuguquguqukeni?